Desailly – Spain Haddii Ay K- Aduunka Qaadaan Waxay Noqon Doonaan…
HomeWararka MaantaDesailly – Spain Haddii Ay K- Aduunka Qaadaan Waxay Noqon Doonaan…
Halyey-gii difaaca xulka qaranka Faransiiska ee ku guulaystay koobka aduunka 1998 isla markaana hantiyey horyaalka qaramada qaarada Yurub ee 2000, Marcel Desailly ayaa sheegay in xulka Spain noqon doono xulkii ugu awooda badnaa dunida haddii ay ku guulaystaan koob aduunka sanadkan Brazil ka dhacaya.
Desailly ayaa tilmaamay in xulka Spain uu sanadihii ugu dambeeyeyba khaas ahaan intii u dhaxaysay 2008 ilaa 2012, ay dunida ku haysteen guulo waaweyn oo ay gaadheen, iyagoo mucjiso ku dhigay qaabka kubada haysashada oo la waayay koox soo barbar istaagta.
“Haddii Spain ku guulaysato koobka aduunka, waxay noqon doontaa mucjiso,” ayuu yidhi.
“Dhabtiina waxay noqon doonaan xulkii ugu fiicnaa taariikhda kubada cagta. Waxaanu helnay fursad kale oo aanu koobka aduunka kaga qayb galno , haddii aanu nahay France, waanan ognahay inay adag tahay sidaanu culayska isaga qaadnaa.
“Laakiin Spain, xul ahaan, qaab ciyaareed ahaan, waxay haystaan ciyaaryahanadii suurto gallin lahaa, xataa haddii ay kugu jiraan ciyaaryahano qaab ciyaareedkoodu hoos u dhaco, waxay haystaan ciyaaryahano badan oo lagu bedeli karo – [Alvaro] Negredo iyo [Santi] Cazorla tusaale haddaan u soo qaato – waa kuwo hanaanka dhamaystiri kara.
“Anigu aad baan ula dhacsanahay inaan daawado qaabka Spain u maaraynayso hawshan, ooy sababtu tahay, waxaynu naqaanaa wax kastoo iyaga ku saabsan, laakiin wali way inaga yaabin karaan, waxaanay awood u leeyihiin inay markasta wax fiican soo bandhigi karaan.”
Spain ayaa la ciyaari doonta xulalka Bolivia iyo El Salvador ka hor inta aanu bilaabmin koobka aduunku oo ay ciyaartooda koowaad la leeyihiin Netherlands bisha June 13 keeda.
Xulka uu wato tababare Vicente del Bosque, oo ku jira Group B, waxay kulankaas kadib wajahi doonaan Chile iyo Australia si ay fadhiisin uga diyaarsadaan hormaynta 16 ka.
‘Waanu Ogayn In Chelse Isku Dayi Doonto ..Sidii Baanay U Dhacday .. Wixii Intaas.’ Tiago
Steven Gerrard oo ka fadhiistay Ciyaaraha Qaranka soona Afjaray 14 sano oo uu Xulka u Ciyaarayey
Pistorius: Halyey Galay Taariikh Xun oo dacwadi ku socoto